design product metal umdla
steel stainless luhlobo lwezinto metal esetyenziswa kakhulu kwimveliso kunye nobomi. Kananjalo material ethandwa kuyilo mveliso. Kushishino, steel stainless isetyenziswa ngokubanzi. Namhlanje kukho ngaphezu kwekhulu iintlobo ngentsimbi mveliso stainless. Kwaye siyazi ukuba sisityebi uyilo steel stainless na. Nazi ezinye yoyilo umdla imveliso steel stainless leyo ukwabelana forcehold yethu yenkampani.
steel stainless uyilo ice cube umdla
Nokuba ikofu okanye cola, ungenza ukunciphisa ubushushu ukuze aphole ngokudibanisa ice iityhubhu, kodwa baya kubingelela ubumnandi. Oku stainless ice sentsimbi cube isebenzisa conductivity lula wobushushu ngezinto yesinyithi, aluchaphazeli ukungcamla le yesiselo. Ngelo xesha linye anike abantu ngumkhenkce okanye yokugquma ukusebenza
umoya fun of insimbi design ukudlala ikhadi
Le akhiwe hayibo ophezulu ezikumgangatho wenziwe insimbi, kwaye ipateni yenziwe ngasekhohlo acid. Isandla enzima kunye ebuntsimbi ayenechaphothi uzenze ukukhangela ingakumbi zinenani phezu kwetafile.
Unique stainless design ikama intsimbi
Le ikama ixesha elide kwaye idibanisa laser ukusika ubugcisa bale mihla kunye ubuchule emveli manual. Yangaphambili uqinisekisa ukuba ikwazi yobusi, ngeli lixa yenza ikama ekhethekileyo;
ikhadi lamatyala ertyisi steel stainless kuyilo isixhobo
TULS kuphela nje enkulu njengekhadi letyala, nezinyuko kulingana eziinkozo, ezenziwe 304 stainless okanye titanium zentsimbi. Le ngothotho lwezixhobo iquka uStan idibanisa imisebenzi umnikazi mobile phone, a qwenge ibhotile, kunye spool yoLungiso. ULucy ihlanganise qwenge ibhotile kunye Umsebenzi utsalo yemodeli ingasetyenziswa qinisa ngezikhonkwane ngobukhulu ezahlukeneyo ezahlukeneyo;
Creative stainless steel uziphu style umYuda ...